Ukukhiqiza Kwedijithali | Ama-prototypes nezingxenye zokukhiqizwa kwevolumu ephansi - i-Createproto - i-Createproto Tech Co., Ltd.
MAYELANA NATHI / Singobani
I-Createproto yasungulwa ngoJuni 2008 ngu USimon Lau, uMechanical Mechanical obefuna ukwehlisa kakhulu isikhathi asithathayo ukuthola izingxenye zepulasitiki ezibunjiwe ngomjovo. Isixazululo sakhe bekuwukusebenzisa inqubo yendabuko yokwenza ngokwakha isoftware eyinkimbinkimbi exhumana nenethiwekhi yezigayo nemishini. Ngenxa yalokhu, izingxenye zepulasitiki nezensimbi zazingakhiqizwa ngengxenyana yesikhathi eyayike yathatha ngaphambili. ngenhloso yokunyakazisa ukucabanga okujwayelekile emhlabeni wokukhiqiza. Noma sikwandisile ukusebenza kwethu emhlabeni wonke, lowo moya uyaqhubeka ukusikhuthaza. Lonke ilungu lethimba lethu lobuholi lizinikele ekuphonseni inselelo isimo esikhona ngokubhida okungapheli ukwenza ngcono ukuthi siwasebenzela kanjani amakhasimende ethu.
Kule minyaka eyishumi ezayo, sizoqhubeka nokwandisa imvilophu yethu yokubumba umjovo, sethule imishini esheshayo ye-CNC.
Ku-2016, sethule izinsizakalo zokuphrinta ze-3D zebanga lezimboni ukuvumela abakhiqizi bemikhiqizo, abaklami, kanye nonjiniyela indlela elula yokuhamba ukusuka ekuqhubekeni kwasekuqaleni kuye ekukhiqizeni ngevolumu ephansi.
UMBONO WETHU - Ukwenza lula inqubo yokwenza izinto ngaphandle kokuyekethisa ikhwalithi.
UMGOMO WETHU - Ukuhlinzeka ngokulethwa okufika ngesikhathi komkhiqizo osezingeni eliphakeme kumakhasimende ethu emhlabeni jikelele.
Ezinye zezinkampani ezinkulu emhlabeni wonke ziphendukela kithi lapho zidinga izingxenye ezingabizi, ezenziwe ngokwezifiso esimisweni esiqinile. Futhi akukhona nje ngoba kumnandi ukusebenzisana nathi. Kungenxa yokuthi sichaze ukukhiqizwa okwenziwe lula.
SIPHAZAMISEKA IBHIZINISI NJENGOKUJWAYELEKILE
E-Createproto, sithanda ukusho ukuthi asisona isitolo sikayihlo sokuthola imisebenzi. Sisuse izithiyo zebhizinisi njengokujwayelekile— izikhathi zokuhola ezinde, amasu aphelelwe yisikhathi, izinqubo ezingaguquguquki, ikhwalithi engathembekile — ukugxila konke ukusebenza kwakho kuwe: izidingo zakho, imininingwane yakho, isabelomali sakho, nesikhathi sakho.
Amaqembu ethu okuthengisa nokuhlinzeka ngamakhasimende ayatholakala kusuka ngo-7 ekuseni kuya ku-6: 30 ntambama i-CST, ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu, ukusiza ngama-oda nokuphendula noma imiphi imibuzo mayelana nezinsizakalo zethu. Ungaxhumana nathi ku-inthanethi nganoma yisiphi isikhathi.
Ifektri Faka: Isakhiwo Sesithathu, iTanglian 3 Street, iTangxia Town, iDongguan, 523710 China.
Rapid Prototyping Futhi Ukukhiqiza, Cnc Rapid Prototyping, Ukuvikeleka Ngokushesha, Izinsizakalo Zokuphrinta Nezokushesha ze-3d, Cnc Prototyping, Ukuvikela okusheshayo,